Lipulekh dispute : ….. Nepal’s deemed diplomacy | Border Nepal Buddhi
Lipulekh dispute : ….. Nepal’s deemed diplomacy
Posted on June 17, 2015 by bordernepal
Lipulekh dispute :
Attack on sovereignty and Nepal’s deemed diplomacy
लिपुलेक विवादः सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमण र नेपालको असफल कुटनीति
बुधबार, आषाढ २, २०७२ १९:३९:१२
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद्
भारत र चीनले व्यापारका लागि नेपाली भूमि लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने समझदारी गरे । आफ्नो भूमि प्रयोग गर्ने दुइ देशबीचको समझदारी नेपाललाई पत्तै भएन । समझदारी भएको लामो समयपछि भारतले वेभसाइटमा राखेपछि मात्र नेपालले थाहा पायो । त्यसपछि विभिन्न किसिमका बहस सतहमा आएका छन् । संसदीय समिति ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम’ ले चासो राखेपनि यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा अझै आएको छैन ।
कहाँ पर्छ लिपुलेक ?
दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँ विकास समितिमा लिपुलेक भञ्ज्याङ पर्छ । यो चीनतर्फ जाने नाका हो । लिपुलेक नेपालको पूर्ण सम्प्रभुता भएको भूमि हो । यो भारतको पनि होइन र चीनको पनि होइन । यो त चीन जाने नाका मात्र हो । भारतले नेपालको नाका भनेर बिर्सेको भए पनि चीनले किन बिस्र्यो भन्ने कुरा चाखलाग्दो छ ।
लिपुलेकको ऐतिहासिक पाटो
लिपुलेक मात्र होइन, त्यो भन्दा दश किलोमिटर पश्चिमको कालापानी जहाँ अहिले भारतीय फौज छ । त्यो पनि नेपालकै हो । लिपुलेकभन्दा ५३ किलोमिटर पश्चिम लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग नेपालकै हो । सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना कालीनदी भनेको छ । सुगौली सन्धि ताकाका दस्तावेज अध्ययन गर्दा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी कालीनदी भनेर लेखिएको छ । लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वतर्फ कालापानी र लिपुलेक मात्र होइन, कुटी, नावी गुन्जी जस्ता ठाउँ बस्ती पनि नेपालको ठहर्छ । तर विडम्बना भारत र चीनबीच १९६२ मा सीमा युद्ध हुँदा चिनियाँहरुले युद्धमा विजय हासिल गरे । अनि भारतीयहरुले केही भाग गुमाए । चिनियाँले त्यहाँ कब्जा गरे । कालापानी, लिपुलेक निकै ऐतिहासिक स्थान हो । लिपुलेक भञ्ज्याङबाट चिनियाँ सेना अगाडि बढ्यो भने भारतीयले गोली बर्साएर त्यहीँबाट फिर्ता पठाउन सक्ने भएकाले भारतीयहरुले त्यही अड्डा जमाए । र अहिलेसम्म पनि अड्डा जमाएर बसिरहेका छन । अहिले त कालापानीमा सातवटा अण्डरग्राउन्ड बंकरहरु बनाइएको छ । तीनवटा प्रशासकीय भवनहरु बनाइएको छ । संचारका माध्यमहरु पनि सिर्जना गरिएको छ ।
नेपालको कूटनीतिक असफलता
नेपालको भूमि जान्दाजान्दै भारत र चीनले व्यापारका लागि त्यही नाका खोल्ने सहमति गरे । एउटा सार्वभौम मुलुक नेपालको भूमिबारे सम्बन्धित मुलकलाई जानकारी नै नदिइ उत्तर र दक्षिणका छिमेकीले कसरी निर्णय गरे त ? यसमा नेपालको कुटनीति फितलो भएका कारण चीनले पनि विर्सेर भारत र चीनबीच नेपालको सम्प्रभूता भएको लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार गर्ने समझदारी भएको हुनुपर्छ । अहिले यही देखियो । भारतका पदाधिकारीहरुले पनि कालापानीसम्म पनि विवादित क्षेत्र हो । दुवैदेशबीच समझदारी गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । अहिलेका भारतका प्रधानमन्त्रीले गत भदौमा नेपालको भ्रमण गर्दा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे । त्यसमा कालापानी र सुस्ताको बारेमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुले तल्लो तहबाट प्राविधिकको सहयोग लिएर काम गर्ने भनेर निर्देशन दिइएको छ ।
यसदेखि बाहेक भारतका तत्कालिन् प्रधानमन्त्री आइके गुजराल नेपाल भ्रमण गर्दा संचारकर्मीले कालापानीबारे सोधेका थिए । त्यसबेला उनले नेपाल इण्डिया ज्वाइन्ट टेक्निकल लेवल वाउन्ड्री कमिटीले यस सम्बन्धमा काम गरिरहेको छ । यदि त्यो संयुक्त कमिटीले कालापानी नेपालको भन्छ भने कालपानीबाट भारतीय फौज तुरुन्त हटाइने छ भनेका थिए । यसैगरी राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी विदेशमन्त्री भएका बेला नेपाल आउँदा पनि कालापानी र सुस्ता सम्बन्धमा दुई देशबीच मित्रतापूर्ण तरिकाले छलफल गरेर समस्या सुल्झाइने छ भनेका थिए । यस्तो भनिएकोमा हालका भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर भारतीय फौज बसिरहेको ठाउँबाट चीन र भारतको व्यापार वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा नेपालका लागि धेरै संवेदनशील कुरा हो । चीनले पनि कालोपानीको बारेमा नजानेको छैन । नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासले पनि दश वर्षजति अगाडि कालापानी, भारत र नेपालको विवादित क्षेत्र हो भनेको कुरा चीनलाई राम्ररी जानकारी छ ।
दुइपक्षीय वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर चीनले सूचना नै जारी गरेको थियो । यस्तै गरेर ५६ सालमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत मिस्टल योङले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए– ‘सन १९६१÷६२ मा नेपाल र चीनको बीचमा सीमाङ्कन भयो । त्यो सीमाङ्कन हुँदा कालापानी नेपालकै हो । यद्यपि त्यसबेला पुराना नापी, दस्तावेजको व्यवस्था गरिएको हुनाले नेपालको पश्चिमा सीमा लिम्पियाधुरा हो भनेका थिए । यो कुरालाई बिर्सेर चीनले पनि भारतसँग सम्झौता ग¥यो । यी सबै काम हुनु तर कार्यान्वयन नहुनुमा नेपालको कुटनीति नै फितलो भन्दा अन्यथा नहोला ।
राजदूतले गन्धै पाएनन्
भारतबाट प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदैछन भने हाम्रा दिल्लीका राजदूतले किन चासो राखेनन् । नेपालसम्बन्धी कुनै वार्ता हुन्छ कि, केही सन्धिसम्झौता हुन्छ कि भनेर किन चासो राखिएन ? चाहे त्यो सीमानाको कुरा होस् । चाहे व्यापार वाणिज्यको । नेपालमा भूकम्प आएको छ । भूकम्पको बारेमा दुई देश मिलेर सहयोग गर्ने कुरा हुन्छ कि भन्ने कुरा मात्र होइन, मोदी चीन जाँदा के कुरा हुँदै छ भन्ने कुरो दिल्लीमा भएको हाम्रो नेपाली राजदूतले गन्ध पाउनुपर्ने हो । त्यो पाएनन् । त्यस्तै चीनको राजधानी बेइजिङमा नेपाली दूतावास र राजदूत पनि छन । उनले पनि त केही चाल पाउनुपर्ने हो । त्यो कुटनीतिक क्षमता उनले पनि राख्न सकेनन् । बाहिर मानिसले चाल नपाएका कुराहरु जानकारी लिने र दिने कुरा नै कुटनीति हो । हाम्रो नेपालको दूतावासले गन्ध समेत चाल पाउन सकेनन् । यसलाई कुटनीतिक सफलता भन्ने कि असफलता ? भारतीय वेभसाइटमा राखेपछि बल्ल हल्लाखल्ला भयो । यसमा हाम्रो नै कमजोरी देखियो ।
हाम्रो सम्प्रभूताको निमित्त त्यो खारेज गर्नुपर्छ । तर चीन र भारत विश्वको ठूला देश हुन् । चीनले विश्वलाई आर्थिक रुपमा गाँजीसकेको छ । अब चीनलाई पनि विश्वको शक्तिशाली बन्न भारतको सहारा चाहिएको छ । भारत पनि ठूलो प्रजातान्त्रिक देश हो । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुले आफ्नो बेइज्जति हुने सम्झौता खारेज गर्लान् कि नगर्लान् । यो मननीय कुरा हो । यदि मानेनन् भने हामीलाई पनि सहभागी गरियो भने बेस हुन्छ होला ।
भारत र चीन नेपालका मित्र हुन् । नेपाल पनि ती दुवै देशको मित्र भएको हुनाले अब चीन र भारत मात्र होइन, नेपाललाई पनि सहभागी गराएर व्यापार वाणिज्यको कुरा गरियोस् भन्ने माग गर्नुपर्छ । नेपाललाई पनि फाइदा होस् । नेपालमा भएका कच्चापदार्थ सस्तो भाडामा पुग्न सकोस् र सस्तो मूल्यमा सामान ल्याउन सकियोस् भन्ने हिसाबले सोच्नुपर्छ । कुटनीतिक चालबाजी अपनाएर, दुवै देशलाई सम्झाएर, अनुरोध गरेर नेपाल पनि सहभागी भएर व्यापारमा लाग्नुपर्छ ।
– See more at: http://nepalpati.com/news/11528/buddhi-narayan-shrestha#sthash.qUP29X5j.dpuf
« Message of India-Bangladesh Border Agreement Warrant Order Authority to Armed Police Force ? »